Guddiga Doorashooyinka: Qof isagu wax raba, wax qeybintiisa ma lagu kalsoonaan karaa? | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Muddo hadda laga joogo qiyaastii sanad ayaa dowladdu magacawday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo ka koobnaa 9 xubnood oo ay guddoomiye u ahayd Xaliimo Ibrahim Ismacill (Xaliimo Yarey) ayaan guddigaas oo aan la kala dirin oo sidiisii u dhisan, Madaxweyne Xassan Shiikh soo saaray guddi cusub oo isagana la yiraahdo guddiga doorashooyinka oo ka kooban xubno ka kala socda DFS, Maamul goboleedyada iyo xubno iyaga loogu magac daray aqoonyahanno. Waxaana dad badani weli la yaaban yihiin labadaan guddi doorashooyin sida ay u kala shaqeyn karaan iyo weliba awoodaha kala duwan ee ay tahay inay kala yeeshaan. Mase magacaabidda guddigaan cusub waxa uu meesha ka saarayaa kii hore oo dhammaan howsha doorashooyinka waxaa horjoog ka noqonaya guddigan cusub?
Waa su’aalo aan illaa iyo hadda aan jawaab loo heynin, balse in muddo ah, shaqada dowladda iyo xafiiska madaxweynuhu waxa uu ahaa inuu magacaabo jagooyin iyo guddiyo aan si weyn looga fikirin oo weliba laga kordhiso kuwo horay loo magacaabay oo in muddo ah soo shaqeynayay. Waxaana taas tusaale nooga filan magacaabidda degdegga ah ee uu madaxweynuhu magacaabay guddigaan, waxeyse tani ka danbeysay cabashooyin aan yareyn oo uu guddoomiyaha guddigii doorashooyinka Xaliimo Ibrahim Ismaciil ay horay ugu sheegtay in shaqooyinkii guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ay faragelin ku hayaan dowladda iyo maamul guboleedyada.
Haba loo qaato in guddigaani ku yimaaday xeer jajabka iyo maamul xumada dalka dilootay oo barasaabyada maamulladu dowladda federaalka ku qasbayaan waxa ay rabaan, laakin ma waxaa la garan waayay in guddigii hore xil ka qaadis lagu sameeyo, sababtii la rababa ha loo cugsadee, lana magacaabo guddiga cusub, guddigaan cusubse uu noqdo guddi ummadda Soomaaliyeed ku qanci karaan oo uusan madaxweynuhu u magacaabin isagoo ka fiirinaya baahiyihiisa gaarka ah ee ku aadan doorashooyinka soo socda.
Sidayse u suurtoobeysaa qof isagu raba inuu xildhibaan noqdo inuu haddana guddiga doorashooyinka xubin ka noqdo? Sidee qof wasiir ah amaba metela maamul goboleed isaga looga filayaa inuu sameeyo cadaalad aysan kuwii isaga soo wakiishay aysan dan ugu jirin? Mase laga filayaa inuu isagu keeno wax aan isaga danaha gaarka u ah ee ah inuu xildhibaan noqdo aan aheyn? Sidee kuwa la tartamaya ay u heli karaan sinnaan amaba kalsooni ay kula tartamaan kii isagu shaqadiisa aheyd inuu ilaaliyo habsami u soccodka doorashooyinka, oo haddii qaladaad dhacaan ay tahay in isaga loo dacwoodo, haddii uu isagii u tartamayo tartankii uu isagu ka ahaa garsooraha? Guddigani waxa uu u egyahay garsoore kubadda cagta oo isagu ka tirsan kooxaha cayaaraaya mid ka mid ah, oo mar kasta oo ay kooxdiisu cayaarto isagu ku howlan sidii ay kooxda uu ka tirsan yahay ay ku guulaysan laheyd illaa iyagu ay noqdaan kooxda ugu sareysa. Taasina waa wax aan horay u dhicin oo laga yaabo inay gaar u noqon doonto qaabka doorashooyinka loo maamulo Soomaaliya, waaba haddii la iska yeelee.
in kasta oo aysan ku cusbeyn Soomaaliya oo ay dhaqan naga noqotay, in qof xil haya haddana loo dhiibo xil kale oo uu labadii xil amaba sedexdii xil uu hayay uusan mid wax ka qaban, haddana uu weli xil kale u sii hanqal taagayo, hadana, waxaa laga rabaa xubnahaas la magacaabay ee ka tirsan guddiga doorashooyinka cusub, iyaguna u sheegay reerahooda inay rabaan inay u tartamaan xilka baarlamaanka inay iyagu xal la yimaadaan, waayo haddii aad rabto inaad reerkaada metesho oo ay jiraan qiyaastii kontomeeyo adiga kula mid ah ee raba inay kugula tartamaan xilkaas reerka loo qabanayo oo ay Soomaali ku heshiisay in sidaas wax loo soo xulo, waxaa muhiim ah in la helo sinnaan loo siman yahay ka qeyb galka tartanka doorashooyinka. Waxaana hubanti ah qofkii tartamaya inuusan yeeli doonin inuu la tartamo qof isagu qeyb ka ah dadka iyagu maamulaya qaabka loo tartamayo, oo laga yaabo, inkasta oo aysan weli cadeyn, inay iyagu soo xulaan amaba ay farogelin ku sameeyaan dadka wax xulaya oo iyagu codeyn doona, maadaama dadka codeynaya ay yihiin dad reerka laga dhex keeni doono.
Ugu danbey, waxaa ila haboon haddii la heli karo in inta waqtiga la heysto la kala saaro labadaan guddi ee isku dhinac dhisan waxa ay kala yihiin iyo weliba shaqooyinkooda u kala gaarka ah, iyo in cid walba oo iyagdu rabta inay ka mid noqoto dadka tartamayo inaysan ka tirsanaanin guddiyadaan mid ka mid ah oo weliba haddii uu qofi ogyahay inuu xilkaas daneynayo uu iska casilaa xilkaas si uu ula sinnaado dadka kale ee walaalihiis ah ee iyaguna aaminsan inay uga fiican yihiin xilkaas. Haddii aysan taasi dhicin waxaa halis loogu jiraa in qaabka wax loo soo xulayo, oo sanadkaan la sheegay inay ka duwanaan doonto sanadadii iyo doorashooyinkii hore inaysan waxba iska bedeli doonin ooba laya yaabo inay ka sii xumaato. Waxaana kula talinayaa dhamaan xubnaha doorashooyinka u taagan inay diidaan oo ay ka horyimaadan in qof ka tirsan guddiga doorashooyinka hadana uu isu sharaxo inuu noqdo xubin tartanta iyada oo la ilaalinayo kalsoonida dadka walaalaha ah ee la yiri idinku isi soo xula oo qof idin metesha keensada.
Maanta qofka aad doorato ayaa laga yaabaa inuu sanado badan kuu sii ahaado mid ku metela. Hadaba qofkaasi ha noqdo mid adiga ku metela oo aan dhabarka ku sidan qorshoyaal kale oo aan qiimo u laheyn dadka uu metelo, waana in xulashada aad qof xulaneyso, maadaama lagu yiri adiga soo xulo, aysan noqon mid ku salaysan caadifad iyo isqabqabsi “qolka” dhexdiisa ah ee ay noqotaa mid ku saleysan, maxaa naga maqan oo uu qofkaani keeni karaa? Muxuu dalka iyo dadka ku soo kordhin karaa? Mase yahay qof markiisii hore looga bartay u hiilinta danta guud. Laakiin yaan marna lagaaga dhigin qof hal dheg wax ka maqla, oo aan shalay iyo dorraad aysan dhibeynin dhibkaadu, inuu maanta ka fiican yahay siduu shalay ahaa, oo marka aad doorato noqon doona mid adiga kuu damqada. Allow kuwo dadka iyo dalka daryeela.
« Yaan Laguu xulune xulo, oo xaaraan cune yuusan ku metelin, oo nin aad la xisaabtami karto keenso ummaddada Soomaaliyeedna u keen.
Ma Doorasho dadban, mase duudsi dadban. »